AVG & Windows Crack- HELP!!!! — MYSTERY ZILLION
AVG & Windows Crack- HELP!!!!
Windows က ဆိုင်က Crack ပဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အရင် Norton Antivirus ကိုလည်း crack ပဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက Norton က ဘာမှ Update မပေးနိုင်တော့လို့ ဖြုတ်ပြီး AVG 7.5.485 ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ အရင် Windows ထဲမှာ ရှိတဲ့ msvcr80.dll တို့လို ဖိုင်တွေကို virus, trojan, စသည်စသည်တွေပါဆိုပြီး AVG က ကစ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ (:((:(( အခု microsoft office 2003 ထဲမှာ Exel မရတော့ပါဘူး။ Gtalk ကိုလည်း install လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး (.dll) ပဲ ပြဿနာပေးတာပါ။ System Restore လည်း မပေးတော့ပါဘူး။ AVG ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး System Restore လုပ်ကြည့်ပေမယ့် မရတော့တာပါ။ ဒီကျွန်းပိစိလေးမှာ ဒီလိုတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါလားနော်။ Windows Back up က DVD ခုတ်မထားရသေးဘူး။ Hard Disk ကလည်း Partition ခွဲမထားဘူး။ သိမ်းထားသမျှက (ဟင့်) My Document ထဲမှာတဲ့။ (:((:(( အခု application တစ်ခုခေါ်လိုက်တာနဲ့ သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ .dll မတွေ့ဘူးလို့ချည်း ပြောပြောနေတယ်။ ဘယ့်နှယ်လုပ်ရပါ့ ဗျာတို့။ :102: ကယ်တော်မူကြပါဦးဗျာ :77::77::77:
Windows Repair လုပ်လိုက်လေ Bro.
လိုနေတာတွေ သူ့ဘာသာဖြည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ Error လဲသူ့ဘာသာ ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။
Disk Error Checking လုပ်ကြည့်ပေါ့။
Windows Repair မလုပ်ပဲ data တွေပြန်ထုတ်ချင်ရင် Bro စက်ရဲ. Harddisk ကို တခြားစက်မှာ Secondary Join ပြီး ထုတ်လိုက်ပေါ့ Bro.
Windows Repair မလုပ်ပဲ data တွေပြန်ထုတ်ချင်ရင် Bro စက်ရဲ. Hard disk ကို တခြားစက်မှာ Secondary Join ပြီး ထုတ်လိုက်ပေါ့ Bro.
Mr. Alexander ရဲ့ ကျေးဇူးကြီးပါပေ့။ စကားမစပ်၊ အမရဲ့ Windows XP professional Install CD & Key လေးများ ရှာလို့ ဖွေလို့ လွယ်မလားဟင်။ လောလောဆယ် လက်ထဲမှာ ရှိနေတာတွေက ဂန့်ကုန်ပြီ :2: ဒီမှာ အရင်ကတော့ ဖိုင်တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ဒါကြီးကတော့ Rapidshare ကနေ လင့်ရရင် အသိကိုပြောပြီး ဒေါင်းဖို့ အကူအညီတောင်းမှာပါ။ (link တောင် အဖြစ်ရှိအောင် မရှာတတ်သေးဘူး-ခုထိ) အားနာလို့။
အင်း .. ပြသာနာက များပါဘိသနဲ့ ..
Data တွေ Documents တွေ ကအရေးကြီးပါတယ်.. ubuntu cd နဲ့ live တက်ပြီ data တွေကို ကယ်ဆယ်လိုက်ပါ။
ဘာမှ မခက်ဘူး .. ubuntu live cd တချပ်သာဆောင်ထား ..
အခု Windows ကတော့ တက်တယ်၊ ပြီးတော့ Data, Document ဖိုင်တွေ အကုန်မပျောက်ပျက်ဘူး၊ တခြားစက်မှာ ကူးဖွင့်ရင် ဖွင့်လို့ရတယ်။ application ကို ပေး မ run တာကလွဲရင် အားလုံး သုံးလို့ ဖြစ်နေသေးတယ်၊ :106: ဆိုတော့ ၊ အဲ၊ အခု Desktop ထောင့်လေးမှာ Shredder ဆိုတဲ့ Application လေး ပေါ်နေတယ်ဗျ။ အရင်က အဲဒါ မရှိဘူး၊ အဲဒါကို R-Click ခေါ်ကြည့်တော့ open ရယ်၊ Create Shortcut ရယ် နှစ်ခုပဲ ပါတယ်၊ Delete လည်း ပေးမလုပ်ဘူး ၊ အဲဒါ ဘာကောင်ဖြစ်မလဲ :39: မထိရဲလို့ ဒီအတိုင်းလေး ရှောင်ထားတယ်- ခုထိ။ ပြီးတော့ အခု တင်ထားတဲ့ Spybot Search & Destroy နဲ့ရော AVG 7.5.485 နဲ့ရော ဘာမှ အကြောင်းမပြဘူး။ ဘာတွေလဲ မသိတော့ပါဘူး........:((:((:(( အလွန်ကံဆိုးသော လတစ်လ ဖြစ်ပါကြောင်း။